LSHW: Tora Hardware Ruzivo paGNU / Linux | Linux Vakapindwa muropa
Iwe unenge watoziva maturusi lsusb, lspci, hwinfo, dmidecode, smartctl, acpi, nezvimwe, izvo zvatinazvo munzvimbo dzeGNU / Linux kuti tiite Hardware ruzivo, kunyangwe iro ruzivo runogona kuwanikwa nekuverenga mafaera enhema-FS / proc, senge / proc / cpuinfo, nezvimwewo zvinotibatsira. Zvakanaka, sezvazvinowanzoitika, kune dzimwe nzira, dzimwe shoma, dzakadai saHwinfo, iyo isina chete chishandiso cheCLI, asi zvakare inonakidza GUI iyo inotiyeuchidza nezvezvirongwa zvakaita seAIDA64 kana Everest ...
Asi nhasi tichataura nezve chimwe chishandiso, inonzi lshw uye zvakare inoshanda kunyora uye kuwana ruzivo nezve ese Hardware zvishandiso zvechikwata chedu. Izvi zvinogona kukurudzirwa kwazvo kuti tizive Hardware yedu zvakadzama uye nekuziva madhiraivha kana madhairekita atinofanira kuisa, kana maitiro ekugadzirisa zvirinani kernel nyowani yatinoisa mune yedu system, nezvimwe. Dzimwe nguva kungo kwanisa kuratidza ruzivo kubva kuma sensors, kana chinzvimbo ...
Izvo hazviwanzo kuiswa nekumisikidza, saka iwe unofanirwa kuiisa pakutanga usati waishandisa, iyo package iri mune yepamutemo reposheni, saka ingo isa pasuru inonzi lshw nemaneja wepakeji wedistro yako ... Zita rayo, sezvaunofungidzira. , Iyo inouya kubva kuHardware Lister uye idiki yakavhurwa sosi yekushandisa iyo yekuwana ruzivo nezve memory, cpu, cache, kumhanya, network, giraidhi kadhi, I / O zvishandiso, nezvimwe. Kuti uite izvi, inowana ruzivo kubva kune ese ari maviri / proc kubva patafura yeDMI.
Zvekushandisa zvinogona kushandiswa zvese pasina zvisarudzo kune zvimwe zvakajairika kuburitswa kweruzivo sekune dzimwe sarudzo dzinonakidza. Semuenzaniso, kusefa nerudzi rwebhazi kana mudziyo. Kunge lshw -shot kana lshw -businfo sarudzo, kana yeruzivo rwechigadzirwa, unogona kushandisa iyo -class Sarudzo inoteverwa nekirasi. Semuenzaniso kune system ruzivo lshw -class system kana ndangariro ine lshw -class memory… Kuti uwane rumwe ruzivo, ona man lshw.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » LSHW: Tora Hardware ruzivo paGNU / Linux